portal │ပညာရှင် Hans Kottke | စိတ်ကူးများနှင့် Impulses သတင်းပို့ရွှေ့ကြောင်း ...
မတ်လ 28, 2019 | မိမိအ Kottke | Tags:: စနစ်တစ်ခုထဲကပြိုလဲ, Braunschweig, ပန်းချီကားများ၏ပြပွဲ, Kaufbar.
မတ်လ 21 ရက်, 2019 | မိမိအ Kottke | Tags:: Mikroplastik, Plastik, ပတ်ဝန်းကျင်, Umweltverschmutzung.
categories: 2019, ယခု, ယေဘုယျ, နောက်ခံ, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
ရိုင်းလှည့်ပတ် – တရားအားထုတ်ရန် …
ငါကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခံစားရတယ်… ဒီနေရာမှာတစ်ဦးချင်းစီရုပ်ပုံအလှနျအရေးကွီးမဟုတျပါဘူး. ငါသည်ဤအံ့သြဖွယ်ဂြိုလ်မြေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နားလည်.
ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်မှဆငျခွ, အဘယ်သို့သောအခြင်းနှင့်သေးသောအရာကိုရှိပါတယ်ဖြစ်ပျက်မှ. ငါသည်ဤမြေတပြင်လုံး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရယ်.
အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းအားဖြင့်မြေကြီးကိုတစ်တစ်ခုတည်းပတ်လမ်း, 408 မျက်နှာပြင်အထက်ကီလိုမီတာ, နှင့် 9.966 အဆိုပါနိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းတောင်တက်၏ချုံးဓာတ်ပုံများ 57 မှ 6. အောက်တိုဘာလ 2018 မှတျတမျးတငျထား.
တစ်ကြာချိန်နှင့်အတူ metadata ကိုရည်ညွှန်းခြင်းနှင့်ဘောင် Interpol ကို အသုံးပြု. တကအချိန်အတွက်အချိန်ကုန်ပြောင်းလဲခြင်း 1:32:20 နာရီ.
ငါ့ကိုအဘို့ဤမြေတပြင်လုံးနှင့်အတူတရားအားထုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည် – ဖြစ်ခြင်း.
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကသင်ကြိုက်နှစ်သက်ဖြစ်ပါသည်. ပုံအရွယ်အစားနှင့်ခံစားသတ်မှတ်ရန်, အဘယ်အရာကိုကဆိုလိုတယ်, ဒီဂြိုဟ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်…
March 20th, 2019 | မိမိအ Kottke | Tags:: GAIA, Meditation, Orbit, Planet ကိုမွကွေီးပျေါ, Raumstation, Sein.
categories: ယေဘုယျ, နောက်ခံ, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
“အနာဂတ်များအတွက်သောကြာနေ့” – Braunschweig အတွက်ကျောင်းသားသပိတ်
မိုးရွာနေသော်လည်းသောကြာနေ့တွင် Braunschweig လာ., မတ်လ 15 ရက်မှ 2019, အဖြစ်. 2.700 Braunschweig အတွက်နန်းတော်ရင်ပြင်ပေါ်တွင်ကျောင်းသားများအတူတကွ, ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ်သူတို့ရဲ့ကျောင်းကိုသပိတ်မှောက်ခြင်းဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်. သူတို့တစ်တွေကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလှုပ်ရှားမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းခဲ့ကြသည် (အကွောငျး 120 နိုင်ငံပေါင်း), ဆှီဒငျ Greta Thunberg ခြင်းဖြင့်အစပျိုးခဲ့သော.
သူတို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်: “ကျနော်တို့ကျောင်းပြေးမကစားကြဘူး, ကျနော်တို့ကိုတိုက်!”
အဆိုပါမိန့်ခွန်းထဲမှာနန်းတော်ရင်ပြင်မှာစိတ်ဓါတ်များနှင့်ဂီတကောင်းသည်. ဗဟို Braunschweig ကဆန္ဒပြပွဲရှိပါတယ်နောက်တော်သို့လိုက်. အတော်များများကအဟောင်းတွေဖြတ်သွားကျောင်းသားများ၏သပိတ်အရေးယူကြိုဆို. အဆိုပါနိုင်ငံရေးသမားများဟုမေးခဲ့သည်, သူတို့အခုဘောင်းဘီထဲမှာမြည်းခဲ့လျှင်, ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများအတွက်ဖြတ်မသက်မသာဆုံးဖြတ်ချက်များမှ.
“ကျနော်တို့ဆက်လုပ်ကြလိမ့်မည်, သူမနောက်ဆုံးတော့ဂီယာသို့ရရှိသွားတဲ့သည်အထိ”, ကျောင်းသားများထင်.
နောက်တစ်နေ့အဓိကဖြစ်ရပ်မတ်လ 29 ရက်ဖြစ်ပါသည်, 2019 စီစဉ်ထား.
မတ်လ 16, 2019 | မိမိအ Kottke | Tags:: 2019, Braunschweig, အနာဂတ်များအတွက်သောကြာနေ့, Greta Thunberg, ကြောငျးသား, ကျောင်းသားများကိုသပိတ်.
categories: 2019, ယခု, ယေဘုယျ, Braunschweig | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
အဆိုပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြွေလွတစ်ခုကာတွန်းဖြစ်ပါသည်, စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်မောင်းနှင်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်. သူကဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏လူ့ကုန်ကျစရိတ်မှာကြည့်ခြင်းနှင့်သမိုင်းအတွက်စစ်ပွဲများ၏နံပါတ်ကိုယ်စားပြုတယ်, မကြာသေးခင်ကပဋိပက္ခတွေမှာခေတ်ရေစီးကြောင်းအပါအဝင်, အတိုင်းအတာအတွက်ကိုကိုယ်စားပြု.
March 10th, 2019 | မိမိအ Kottke | Tags:: 2.ကမ္ဘာ့ဖလားစစ်ပွဲ, Holocaust, စစ်ပွဲများ, Opfer, Zivile Opfer.
categories: ယေဘုယျ, သမိုင်း, နောက်ခံ | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုအုပ်စုသည်စိုးရိမ်ပူပန်၏နယူး home page ကို & ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်
ဤတွင်တိုက်ရိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါသည် SHG စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာ
March 3rd, 2019 | မိမိအ Kottke | Tags:: ကြောက်လန့်, ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်, ပေါင်မုန့်, self-အကူအညီနဲ့အုပ်စုတွေ, Selbsthilfetag, SHG Angst & ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်.
categories: 2019, ယခု, ယေဘုယျ, Braunschweig, ဆေးဝါး | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
ဖေဖော်ဝါရီလ 26, 2019 | မိမိအ Kottke | Tags:: မနုဿဗေဒ, အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပျက်ခြင်း, သမိုင်း, Homo Sapiens မှ.
categories: သမိုင်း, နောက်ခံ, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
Das gleiche Elend und die gleiche Ungleichheit findet sich auch in Deutschland, in Niedersachsen und Braunschweig. Wir nehmen nicht länger hin, dass über 20.000 Menschen in unserer Stadt von Transferleistungen leben müssen, ထို 8.000 Kinder arm und 500 Menschen obdachlos sind.
Die Stammtische finden jeden Donnerstag um 19:00 Uhr im Apo-Restaurant အစား.
Zum Gesamttreffen in Braunschweig finden sich alle am letzten Donnerstag um 19:00 Uhr in der Brunsviga တစ်ဦး.
ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 2019 | မိမိအ Kottke | Tags:: aufstehen, Braunschweig, Buntwesten, Gelbwesten, Sammlungsbewegung.
categories: ယခု, ယေဘုယျ, Braunschweig, နောက်ခံ, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
ကျနော်တို့ကလူကဲ့သို့? လူသားတို့၏သမိုင်း …
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2019 | မိမိအ Kottke | Tags:: မနုဿဗေဒ, Drotschmann, ဖှံ့ဖွိုးတိုးတသမိုင်း, Homo Sapiens မှ, Lesch, လူသား.
categories: သမိုင်း, နောက်ခံ, ဆေးဝါး, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
အထီးထီးနေခြင်း (အထီးထီးနေခြင်း) …
ဖေဖော်ဝါရီလ 18, 2019 | မိမိအ Kottke | Tags:: ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်, အထီးထီးနေခြင်း, Empathy တို့ဖြစ်ပါတယ်, Isolation, Soziale Kontakte.
categories: ယခု, ယေဘုယျ, ဆေးဝါး, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
စာမျက်နှာများ: 1234567 8910 ... 41 42 43 နောက်တစ်ခု
30 အသုံးပြုသူများသည် အွန်လိုင်း
thu ဇူလိုင် 18 6:53:49 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန် 2019